मालपोतको काममा गुणस्तरको सवाल - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १० आश्विन २०७८, आईतवार ११:३९
सबैभन्दा धेरै सेवाग्राहीको भीड लाग्ने कार्यालय अन्तर्गत पर्छ, मालपोत कार्यालय । जहाँ सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही हुन्छन्, त्यहीँ सबैको चासो बढ्ने गर्छ ।
सेवाग्राहीहरुले निर्वाध सेवा पाए वा ठगिए भन्नेमा सामाजिक अगुवा, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी सबैको चासो रहने गर्छ । त्यसैले त्यहाँ सेवा दिने सेवा प्रदायक निकायले संवेदनशील भएर सेवा दिनु अनिबार्य हुन्छ ।
तर जहाँ धेरैको निगरानी परेको छ, त्यहाँकै सेवामा संवेदनशीलता छैन । अन्य कुनै पनि कार्यालयमा नभएको ब्यबस्था मालपोत कार्यालयमा छ । जतिबेला नागरिकहरु शिक्षिक र सक्षम थिएनन्, त्यतिबेला लेखापढी व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको थियो, तर अहिले प्राय सेवाग्राही शिक्षित छन्, सक्षम छन् । उनीहरु आफैले पनि ती कागजात तयार गर्न सक्छन् ।
त्यसका लागि सेवाग्राही स्वयंले पनि कागजात तयार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर बिभाग एवं मालपोत कार्यालयले बिचौलियाको प्रयोग गर्नैपर्ने अनिबार्य व्यवस्था छ । यसले गर्दा ठूलो परिमाणको रकम नखर्चे पनि हुनेमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था कायम छ ।
यसो हुँदा सामान्य खर्च गरेर पनि सम्पन्न हुनसक्ने कामका लागि ठूलो परिमाणको खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिचौलियाको काम गर्ने लेखापढी व्यवसायीहरुले लिने शुल्कमा कुनै सीमितता छैन । सेवाग्राहीको मुख हेरेर शुल्क लिने–दिने परम्परा छ ।
विशेषगरी मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी रिक्त भएको तीनबर्ष भयो । उपसचिव कार्यालय प्रमुख हुनुपर्नेमा केही समय शाखा अधिकृत र बिगत तीन महिनायता सुब्बाको भरमा कार्यालय सञ्चालित छ । जसले गर्दा कामको गुणस्तरीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
अधिकांश सेवाग्राहीले उही दिनमा काम सम्पन्न गरेर फर्कन पाएका छैनन् । यी विविध समस्या मोचनका लागि कार्यालय संवेदनशील हुनुपर्छ । विभागले सबै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्छ । सचेत गराउनु पर्ने निकायले सँधै सचेत गराइरहनु पर्छ ।
खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर
गोरखा बजारभित्रैको सडक जीर्ण भएपछि सवारी चलाउनेले सकस ब्यहोर्नु परेको छ । बजारको मुख्य सडकको
क्लिन गोरखाको अभियान अल्पकालीन कि दीर्घकालीन ?
धेरै सुरुवात गन्तव्य नपुग्दै तुहिन्छ । त्यस्ता अभियानले मात्र गन्तव्य चुम्छ, जसको अभियन्तामा इच्छशक्ति प्रबल
जनगणना सकिनै लाग्यो, छुट्नु होला है !
गोरखामा राष्ट्रिय जनगणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिलेसम्म जिल्लाभर ९० प्रतिशत काम सम्पन्न
उत्तरी गोरखाको समस्याबारे नागरिक समाजको चासो
सरकारी पक्ष उदासिन बनिरहेको उत्तरी गोरखाको समस्याप्रति नागरिक समाजले आवाज उठाएका छन् । बाटो अबरुद्ध